Isikrini se-YK sokucwaswa - I-China YK yochungechunge lokuhlinzekisa isikrini ngokudidayo,Factory -PYM
Ikhaya / UMKHIQIZO / Ukuhlola & Ukugeza
Izikrini ze-YK noma ze-Y Circular Vibrating Screens zisetshenziswa kabanzi ekusunguleni izinto ezahlukene zosayizi, futhi sisetshenziswe njengomshini wokulinganisa ekugqokeni kwamalahle, izinto zokwakha, izimboni zikagesi nezamakhemikhali.
Usayizi wokufaka 0-400mm
impahla Icubungula: Granite, zemabula, i-basalt, limestone, asebenza ngebhethri, amatshe amatshe, i-ore yethusi, i-iron ore, amalahle nokunye
Isikrini esiguqukayo sisetshenziselwa ukuhlukanisa impahla kumasayizi ahlukahlukene ukuze kusetshenzwe eminye. Izinto zithunyelwa esikrinini esingaphezulu kwesikrini lapho zidonswa khona ngokudlidliza futhi zigoqiwe ngokujikeleza okujikelezayo.I-PYM Vibrating Screen ithole igama layo kusuka kushukumiso eside se-semicircular esenza lo mshini ungomunye wemiklamo esebenza kahle kakhulu kuze kube manje.
Isikrini eshukumisayo ikakhulukazi siqukethe ibhokisi lesikrini, isikrini mesh, isidlidlizi, ukumanzisa insimbi yentwasahlobo, chassis nezinye izinto. Iqhutshwa yi-motor ne-V-bhande, ibhulokhi ye-eccentric yesikrini esinyakazayo ibizungeza ngesivinini esikhulu, enikela ngamandla amakhulu we-inrtia ye-centrifugal ukukhuthaza ukuhamba kwesibhakela sesikrini ngokuhamba okujikelezayo ngaphakathi kwe-amplitude ethile. Ngesikhathi sokusebenza, Izinto zokwakha esikrinini esithambekele zibekwa ngaphansi kokuthambekela okudluliselwa ebhokisini lesikrini ukuze kufakwe okushukuma okuqhubekayo kokuphonsa, kule nkathi, izinhlayiya ezincane kunosayizi we-mesh zivinjelwe ngaphandle futhi zihlukaniswe ngamasayizi ahlukahlukene.
2.Amandla adonsayo anamandla
3.Ukuhlolwa okuphezulu kokusebenza kahle
4.Umsindo ophansi ophansi
Imikhiqizo izingxenye ezisele